ခံဝန်ထိုးပြီး အိမ်ပြန်နေကြသူတွေ အထိနာစေဖို့ ထိထိမိမိပြောလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Maythadin
ခံဝန်ထိုးပြီး အိမ်ပြန်နေကြသူတွေ အထိနာစေဖို့ ထိထိမိမိပြောလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
May Thadin | September 18, 2021 | Celebrity | No Comments
သစ္စာဖောက်ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တော့အကပ်မခံပါရစေနဲ့ အရေးတော်ပုံမအောင်မချင်း အိမ်မပြန်ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုခံဝန်ထိုးပြီး အိမ်ပြန်နေကြသူတွေ အထိနာစေဖို့ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်လေးပြောလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားအပြီး အနုပညာရှင်တွေများစွာဟာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်ပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့် ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရပြီး ရှောင်တိမ်းနေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်းရှိသလိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။
၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးSpeak outမလုပ်တော့ဘဲ ခံဝန်ကတိထိုးရင် ဖွင့်ထားတဲ့အမှုကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာ ပျံ့နှံ့လာနေခဲ့ပါတယ်။
ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတာကြောင့် ဘေးလွတ်ရာမှာရှောင်တိမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ယခုမှာတော့ ပိုင်ဖြိုးသုဟာ ခံဝန်ကတိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။
သူမကတော့ သစ္စာဖောက်ဆိုတဲ့ တံဆိပ်အကပ်မခံနိုင်ဘဲ အသက်ပေးသွားသူတွေ၊ထောင်ကျသွားသူတွေကြောင့် ခံဝန်ကတိထိုးမှာမဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယခုအချိန်ထိ အမှန်တရားဘက်ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်နေပြီး ခံယူချက်၊ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတဲ့ သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ပြည်သူတွေက ချီးကျူးလေးစားနေကြပါတယ်။
အရေးတော်ပုံမအောင်မချင်းအိမ်မပြန်ဘူးလို့ ပိုင်ဖြိုးသုက သူ့ရဲ့လူမူကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်စ်ကနေ ဒီကနေမှာပြောလိုက်ပါတယ် ။“ခံစားချက်ကို ဦးစားပေးခဲ့မိလို့ မှားသွားပါတယ်လို့ ခံဝန်လေးထိုးပြီး အိမ်မှာအေးဆေးပြန်နေရမယ်တဲ့လား .။
မိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်တဲ့လား.။အလုပ်တွေပြန်လုပ်ရမယ်တဲ့လား .။တစ်ချို့တွေအသက်တွေပေးသွားကြပြီ .။တချိူ့တွေ ထောင်ထဲရောက်ကုန်ကြပြီ.တချိူ့တွေ အားလုံးကိုပစ်ချထားခဲ့ပြီး လက်နက်တွေကိုင်နေကြရပြီ.။သူတို့တွေအိမ်ပြန်လို့မရကြတော့ဘူး. ။
မိသားစုနဲ့လည်းကွဲကွာကုန်ကြပြီ.။သူတို့ချစ်တဲ့အလုပ်‌တွေလည်းလုပ်ခွင့်မရကြတော့ဘူး. ။အဲဒီ့လူတွေကိုငါရှက်တယ်… ။အဖြစ်မရှိသူဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်‌နဲ့တင်ငါ့အတွက်လုံလောက်ပါပြီ.။သစ္စာဖောက်ဆိုတဲ့တံဆိပ်တော့အကပ်မခံပါရစေနဲ့.။အရေးတော်ပုံမအောင်မချင်းငါအိမ်မပြန်ဘူး”လို့ ပိုင်ဖြိုးသုက ရေးသားထားပါတယ် ။Credit., trendmyanmar
သစၥာေဖာက္ဆိုတဲ့ တံဆိပ္ေတာ့အကပ္မခံပါရေစနဲ႕ အေရးေတာ္ပုံမေအာင္မခ်င္း အိမ္မျပန္ဘူးလို႔ေျပာလာတဲ့ ပိုင္ၿဖိဳးသုခံဝန္ထိုးၿပီး အိမ္ျပန္ေနၾကသူေတြ အထိနာေစဖို႔ ျပစ္ျပစ္ႏွစ္ႏွစ္ေလးေျပာလိုက္တဲ့ ပိုင္ၿဖိဳးသုအာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြားအၿပီး အႏုပညာရွင္ေတြမ်ားစြာဟာ ျပည္သူေတြနဲ႕အတူ ရပ္တည္ၿပီး ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အမွန္တရားဘက္ကေန ရပ္တည္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၅၀၅(က)နဲ႕အမႈဖြင့္ခံထားရၿပီး ေရွာင္တိမ္းေနၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြလည္းရွိသလိုဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြလည္းရွိၾကပါတယ္။
၅၀၅(က)နဲ႕အမႈဖြင့္ခံထားရတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြအေနနဲ႕ လက္ရွိနိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးSpeak outမလုပ္ေတာ့ဘဲ ခံဝန္ကတိထိုးရင္ ဖြင့္ထားတဲ့အမႈကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းေပးမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ လူမႈကြန္ယက္ထက္မွာ ပ်ံ့ႏွံ႕လာေနခဲ့ပါတယ္။
ရဲရဲရင့္ရင့္နဲ႕ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့တဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ၿဖိဳးသုကေတာ့ ၅၀၅(က)နဲ႕အမႈဖြင့္ခံထားရတာေၾကာင့္ ေဘးလြတ္ရာမွာေရွာင္တိမ္းေနခဲ့ပါတယ္။ယခုမွာေတာ့ ပိုင္ၿဖိဳးသုဟာ ခံဝန္ကတိကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဆိုလာခဲ့ပါတယ္။
သူမကေတာ့ သစၥာေဖာက္ဆိုတဲ့ တံဆိပ္အကပ္မခံနိုင္ဘဲ အသက္ေပးသြားသူေတြ၊ေထာင္က်သြားသူေတြေၾကာင့္ ခံဝန္ကတိထိုးမွာမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ယခုအခ်ိန္ထိ အမွန္တရားဘက္ကေန မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေနၿပီး ခံယူခ်က္၊ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားတဲ့ သူမရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကို ျပည္သူေတြက ခ်ီးက်ဴးေလးစားေနၾကပါတယ္။
အေရးေတာ္ပုံမေအာင္မခ်င္းအိမ္မျပန္ဘူးလို႔ ပိုင္ၿဖိဳးသုက သူ႕ရဲ႕လူမူကြန္ယက္ေဖ့ဘြတ္စ္ကေန ဒီကေနမွာေျပာလိုက္ပါတယ္ ။“ခံစားခ်က္ကို ဦးစားေပးခဲ့မိလို႔ မွားသြားပါတယ္လို႔ ခံဝန္ေလးထိုးၿပီး အိမ္မွာေအးေဆးျပန္ေနရမယ္တဲ့လား .။
မိသားစုနဲ႕ျပန္ေတြ႕ရမယ္တဲ့လား.။အလုပ္ေတြျပန္လုပ္ရမယ္တဲ့လား .။တစ္ခ်ိဳ႕ေတြအသက္ေတြေပးသြားၾကၿပီ .။တခ်ိဴ႕ေတြ ေထာင္ထဲေရာက္ကုန္ၾကၿပီ.တခ်ိဴ႕ေတြ အားလုံးကိုပစ္ခ်ထားခဲ့ၿပီး လက္နက္ေတြကိုင္ေနၾကရၿပီ.။သူတို႔ေတြအိမ္ျပန္လို႔မရၾကေတာ့ဘူး. ။
မိသားစုနဲ႕လည္းကြဲကြာကုန္ၾကၿပီ.။သူတို႔ခ်စ္တဲ့အလုပ္‌ေတြလည္းလုပ္ခြင့္မရၾကေတာ့ဘူး. ။အဲဒီ့လူေတြကိုငါရွက္တယ္… ။အျဖစ္မရွိသူဆိုတဲ့ဂုဏ္ပုဒ္‌နဲ႕တင္ငါ့အတြက္လုံေလာက္ပါၿပီ.။သစၥာေဖာက္ဆိုတဲ့တံဆိပ္ေတာ့အကပ္မခံပါရေစနဲ႕.။အေရးေတာ္ပုံမေအာင္မခ်င္းငါအိမ္မျပန္ဘူး”လို႔ ပိုင္ၿဖိဳးသုက ေရးသားထားပါတယ္ ။Credit., trendmyanmar
ပျားရည်အိုင်ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ခဲ့စဉ်က အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကို မျှဝေလာတဲ့ သရုပ်‌ဆောင် မြတ်သူသူဇင်
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အဆိုတော်ရေမွန်အားရည်စူးပြီး ပရိတ်သတ်များမှ ကင်းမရွာမီးဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် အလှူငွေ (၅၃၃) သိန်းလှူဒါန်းခဲ့